Shirkadd ganacsi oo xarun ka furatay Gaalkacyo, (Sawirro) – Radio Daljir
Diseembar 27, 2012 1:52 g 0
Gaalkacyo, Dec, 27- Waxaa maanta xariga laga jaray shirkadda Isbuunyada ee Tabaarak faraceeda Gaalkacyo taasoo ay ka qayb galeen marti sharaf kala duwan.
Gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) oo xariga ka jaray shirkadda ayaa halkaasi ka jeediyay muhiimadda ay shirkadani u leedahay bulshada gobolka isla markaana waxaaa uu ganacsatada ku booriyay inay maal gashi ku sameeyaan dalkooda.
Gudoomiyaha ayaa tallaabo hormarineed ku tilmaamay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee laga furayo deegaanada Puntland.
Ugu horayn waxaa furitaankii xaruntaasi ganacsi waxaa muhiimadda ay u leedahay bulshada iyo sida la rabo in loo taageero sharaxay C/qaadir Yuusuf Ciise oo ka mida masuuliyinta shirkadda wuxuuna ganacsatada oga mahad celiyay ka soo qayb galkooda.
Ciise Cabdi Barre oo ah madaxa shirkadda Albixaar ayaa isaguna hadal kooban oo uu jeediyay waxaa uu bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan hormarinta ganacsiga gudaha ee xortaa.
Waxaa dhinaca kale munaasabadda furitaanka shirkadda Altabaarak ka hadlay ganacsato kale oo lagu marti qaaday oo ay ka mid tahay maamo Saynab oo soo dhawaysay shirkaddaasi cusub sheegtayna inay iswaydaarsan doonaan ganacsi hufan.
Sanadihii ugu danbeeyay deegaanada Puntland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa ku soo badanayay shirkadaha ganacsi ee gaarkaa loo leeyahay kuwaasoo haddii ay sii bataan soo dadajin kara maal gashi uu yeesho dalka.